Gudoomiyaha ismaamulka Migori oo la geeyay isbiitaalka qaran ee dalka ka dib markii uu xanuun ku soo booday – The Voice of Northeastern Kenya
Gudoomiyaha ismaamulka Migori oo la geeyay isbiitaalka qaran ee dalka ka dib markii uu xanuun ku soo booday
Guddoomiyaha ismaamulka Migori Okoth Obado ayaa loo qaaday isbitaalka qaran ee dalka Kenyaatta ka dib markii uu ku soo booday xanuun isaga oo wali lagu haya xabsiga Industrial Area ee magaaladatan Nairobi.
Saaka ayay soo baxeen warar sheegayaa in Mr Obado uu xanuun ka qaaday xabsiga uu ku xiranyahay taasi oo keentay in la dhigo isbitaalka qaran ee dalka.
Gudoomiyaha Migori ayaa loo heystaa dacwad ka dhan ah dil ka dib markii lala xariiriyay inuu ku lug lahaa dilkii loo gaystay gabar dhiganaysay jaamacada Rongo ee lagu magacaabo Sharon Otieno.
Mr Obado ayaa iska fogeeyay dhamaan eedeymihii loo soo jeediyay balse oo kaliya waxaa uu qirtay inuu xarir kala dhaxeeyay gabdhaasi.
Maxkamada sare ayaa diiday in gudoomiyahaasi lagu sii daayo damiin lacageed iyadoona ay maxkamada amartay in xabsiga lagu sii hayo tan ila iyo 8-da bishan October ee sanadkan inta go’aan laga gaarayo kiiskiisa.
Dhanka kale qaar ka mid ah dadka ku nool ismamaul goboleedka Migori ayaa ka cabanayaa adeeg xumo la soo daristay tan iyo intii barasaabka ismaamulkaasi xabsiga la dhigay laguna wado baaritaan ku aadan dilka Sharon Otieno oo 26 sano jir ahayd.
← Madaxweyne Xassan Sheikh oo markii ugu horaysay xaadiray kulanka baarlamaanka.
Maxkamada sare oo sheegtay in la hakiyo dacwadii ka dhanka ahayed ilillian Omollo. →